विश्वविद्यालय Bayreuth को - Higher Education in Germany
विश्वविद्यालय Bayreuth को
गरयो : यूबी
नबिर्सिनुहोला discuss University of Bayreuth
स्वागत छ विश्वविद्यालय Bayreuth को लागि. सोच र अन्तर्राष्ट्रीय सञ्चालन बस Bavaria सबैभन्दा आकर्षक विश्वविद्यालय को एक हुनुको र राष्ट्रिय शिक्षा र अनुसन्धान र्याङ्किङ्ग मा शीर्ष स्थान कब्जा भन्दा बढी माग. यस कारणले, हामी वर्षको लागि विकास लक्ष्य सेट 2020 थप विश्वविद्यालय Bayreuth अतुलनीय प्रोफाइल र प्रतिस्पर्धी छेउको तिखार्ने क्रममा:
अनुशासन यसको विविध एरे धन्यवाद र रणनीतिक चुनिएको ध्यान क्षेत्रमा, Bayreuth विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रीय अनुसन्धान योगदान लागि पहिचान र एक उत्कृष्ट अध्ययन वातावरण प्रदान गर्दछ छ.
Bayreuth विश्वविद्यालय र यसको अध्ययन वातावरण को मामला मा जर्मनी मा अग्रणी गन्तव्य मध्ये एक आफ्नो विद्यार्थीहरूको स्तर.
Bayreuth विश्वविद्यालय एक मध्यम आकारको परिसर विश्वविद्यालय उच्चतम शैक्षिक स्तर प्रतिबद्ध र जो जो ठूलो विश्वविद्यालय देखि नै अलग गर्न अथक प्रयास गरेको छ छ.
जर्मनीको कान्छो विश्वविद्यालय को रूपमा, हामी एक unbiased मा सञ्चालन गर्न सक्षम छन्, शैक्षिक स्वतन्त्रता को आत्म-विश्वस्त आत्मा, वैज्ञानिक प्रगति, र सामाजिक जिम्मेवारी. In line with our vision, हाम्रो शीर्ष प्राथमिकता व्यक्तिगत पर्यवेक्षण छन्, उच्च शैक्षिक स्तर कायम, and creating programmes of study that take current research into account. Our interdisciplinary focus and the innovative collaboration between many of our disciplines are key features of Bayreuth’s research culture.
Retrospect मा, यो कसरी बुद्धिमानी फिर्ता थियो स्पष्ट अब 1975 अंतःविषय अनुसन्धान र शिक्षा संग बलियो विषय क्षेत्रमा संयोजन आधारित विश्वविद्यालय स्थापना गर्न. हाम्रो globalized समाज सामना प्रश्न बढी जटिल हुँदै गइरहेका छन्. सही जवाफ मात्र नजिक पाउन सकिन्छ, क्रस-शास्त्रीय सहयोग - विश्वविद्यालय मुख्य सम्पत्ति एक. विश्वविद्यालय Bayreuth को शैक्षिक स्वतन्त्रता विशेषता छ, वैज्ञानिक प्रगति, र व्यावहारिक सान्दर्भिकता, जो सबै सामाजिक र सांस्कृतिक जिम्मेवारी को सन्दर्भ मा बुझेका छन्.
स्वागत छ हाम्रो एक-को-एक-प्रकारको परिसर गर्न.
यो विश्वविद्यालय को हृदय र प्रेरणा को स्रोत दुवै छ. यो जहाँ मित्रता गरिन्छ छ, सहकार्य सुरु गरिएको छ, र विचारहरू गर्भवती छन्, हाम्रो विश्वविद्यालय नवीनता को एक बीकन भन्ने सुनिश्चित गर्न. वैज्ञानिक विनिमय हाम्रो Communicative परिसर सँगै ल्याउँछ अनुशासन को विस्तृत विविधता देखि एकदम लाभ. किन Bayreuth विश्वविद्यालय यसको प्राज्ञिक उपलब्धिहरूलाई लागि यति धेरै पुरस्कार र सम्मान मनाउन सकेको छ कि शायद.
विश्व एक गाउँ हो
... र Bayreuth केन्द्र स्थित छ. वरिपरि को जनसंख्या संग 73,000, Bayreuth विशेष ठूलो छैन, तर कुराहरू मध्ये एक छ जो यो यति मनमोहक बनाउँछ. मान्छे एक अर्को चलान. सहरमा आफ्नो वार्षिक ओपेरा तिहार लागि विश्व-प्रसिद्ध हुन सक्छ, तर यो पनि विद्यार्थी र अनुसन्धानकर्ताहरूले सांस्कृतिक र कलात्मक आकर्षण को एक धन प्रदान गर्दछ, वाग्नर अलग. यो शहर पार्टी र पब दृश्यहरु विद्यार्थीहरूको हातमा दृढ कुनै आश्चर्य रूपमा आउनु पर्छ. तपाईं कम र कम देखिने बन्ने परिसर र शहर केन्द्र बीच सीमाहरु नोटिस रूपमा तर तपाईं सक्षम आसपास आफ्नो बाटो पत्ता हो कसरी चाँडै छक्क हुनेछ. मात्र एक छोटो समय पछि हरेक कुना मा एक परिचित अनुहार छ किनभने यो केवल हुन सक्छ.
स्थान सबै छ.
प्राकृतिक उत्तरी Bavaria, दायाँ Bayreuth गरेको दरवाजे मा, खेल गतिविधिहरु लागि ठूलो छ: साइकलको, पैदल यात्रा, पहाड-चढाई, क्यानोइङ, राफ्टिंग, र स्किइङ आफ्नो फुर्सदको समय समृद्ध सबै उत्कृष्ट तरिकाहरू छन्. तर, तपाईं अब र फेरि एक बडा शहर को महसूस लालसा के भने, Nuremburg मात्र एक घण्टा रेल सवारी टाढा छ र म्यूनिख मात्र हो2साढे घण्टा टाढा. तपाईं बर्लिन पुग्न सक्छ4कार द्वारा घण्टा, लिपजिग आधा समय मा. र भूल छैन: युरोप को दिल मा रहेको अर्थ प्राग मात्र तीन घण्टा ड्राइभ टाढा पनि छ.
गणित, Physics and Computer Science
जीवविज्ञान, Chemistry and Earth Sciences
कानुन, व्यापार र अर्थशास्त्र
तिमीलाई चाहिन्छ discuss University of Bayreuth ? कुनै पनि प्रश्न, टिप्पणी वा समीक्षा
फोटो: विश्वविद्यालय Bayreuth को आधिकारिक फेसबुक
विश्वविद्यालय बन को बन
ह्यानओभर मेडिकल स्कूल ह्यानओभर
विश्वविद्यालय एर्ल्याङजेन नूर्नबर्ग को एर्ल्याङजेन
विश्वविद्यालय Lubeck को Lubeck
विश्वविद्यालय श्टुटगार्ट को स्टुटगार्ट
Bielefeld विश्वविद्यालय Bielefeld
डार्मस्टाड्ट विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी को Darmstadt